🥇 ▷ Kaameeraha Google ayaa ugu dambeyntii heli kara kontaroolada gacanta ✅
Kaameeraha Google ayaa ugu dambeyntii heli kara kontaroolada gacanta
Sannadkii hore Google dhibaatooyin badan ayaa ku saabsan sameynta filimka ‘Pixel 3’, waana sababtaas sanadkaan ay iyagu yihiin kuwa shaandheeya faahfaahinta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira faahfaahin qaar ka mid ah oo la shaaciyey, oo umuuqda kuwo ka baxsanaya gacanta Google Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waa weyn ayaa noqon doona isbeddelka dalabka kamaradda.
Codsiga kaamirada Google waa mid gaar ah, laakiin aan kaamil ahayn
Kaameeraha Google wuxuu u noqday dalal badan oo kamarad codsi ah. Sababta ugu weyni waa awoodeeda inay riixdo batoon ka tagto «Kameeyuhu ha u sameeyo sixir». Sirta natiijooyinkaani waxay ku jirtaa nidaamkeeda wax soo saar ee hal-abuurka leh, oo awood u leh inuu qabto tiro badan oo qabsasho ah oo uu ku socodsiin karo.
Sababahan dartood, kaameerada Google waxaa lagu qeexay dad badan sida barta ugu fiican iyo kamarad toogasho ah. Laakiin maahan mid kaamil ah, oo adeegsadayaasha horumarsan ayaa og.
Sida loo doorto dejinta ugu fiican ee kamaradaha Google Pixel
Kaameerada Google Pixel waa wax ka bedelka ugu muhiimsan ee taleefanka waana midka dhaliya soojiidashada ugu badan. Marka isla markii la rakibo, sidee loo hagaajiyaa sawirradaada?
Sababta ugu weyn ee gaabiyayadan ayaa ah maqnaanshaha astaamo horumarsan, si kuwa adeegsada aqoonta sawir wanaagsan ay u gaari karaan natiijooyin wanaagsan. Dareenkaas, kamaradda Google aad ayey uga dambeysaa kuwa ay xafiiltamaan. Xitaa dhinacyo sahlan sida qabashada qabsashada RAW lama helin ilaa goor dhow.
Waa maxay sawirrada ku jira RAW iyo maxay tahay sababta moobilkaaga moobiilku u yeesho
Waxaan sharaxnaa waxa sawirrada ku keydinaya RAW iyo sababta aad ugu baahan tahay taleefankaaga gacanta haddii aad rabto inaad si qoto dheer u tafatirto sawirradaada.
Tani waxay umuuqataa inay ugu dambeyntii isbeddeleyso. Sida ku xusan daadadkii ugu dambeeyay ee Pixel 4 waxaan ogaannay inay shaashad lahaaneyso heerka cabirnaanta a ciyaaraha casriga ah. Taasi gaar ah ayaa sidoo kale ka hadlay ‘Qalabka kamaradaha DSLR’, mowduuc aan uga hadleynin in yar oo yaab leh.
Codsiyada sida Moment Pro waxay muujinayaan in kaameerada Google ay leedahay qol lagu hagaajiyo.
Waxay umuuqataa in waxa aan la aqoon uu helay sixitaan, iyo waxa ay ula jeedeen ahaa «In dalabka kamaradu lahaan doono astaamo DSLR». Adigoon helin wax xaqiijin ah, waxay u badan tahay inay yihiin kontaroolo gacanta ku takhasusay.
Maanta, si aad ugu raaxeysan karto kontoroolka gacanta iyo tan gaarka ah ee HDR + marka lagu daro Pixel, waxaa lagama maarmaan noqotay in la iibsado barnaamijka Moment Pro. Sidoo kale maahan wax laga xumaado in ka dib markii aad boqolaal euro ku bixisay moobaylka inaad ku bixiso 2 euro oo dheeri ah dalabka lagula taliyay. Laakiin micnaheedu maahan in kontarooladaasi ay soo socdeen sannado.
Saddex dalab oo muhiim ah oo loogu talagalay Google Pixel 2 XL
Waxaan kuu soo qaadanay seddex dalab oo ka faa’iideysanaya awoodaha gaarka ah ee Google Pixel 2 XL oo aan ku xoojineyno, wanaajinta suurtagalnimadooda.